शीर्षकमा बाइबल पदहरू: युद्ध -> जीवन
प्रेम गर्ने एउटा समय छ, र घृणा गर्ने एउटा समय। युद्ध गर्ने एउटा समय छ, र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय।
दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खड़ा हुन सक्‍नलाई परमेश्‍वरका सारा हातहतियार धारण गर।
उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्‍साफ गर्नुहुनेछ, र उहाँले धेरै मानिसहरूका झगड़ा मिलाइदिनुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्‍ना तरवारहरू पिटेर हलोका फाली र भालाहरू पिटेर छिमल्‍ने हँसिया बनाउनेछन्‌। जाति-जातिहरूले एक-अर्काको विरुद्धमा तरवार चलाउनेछैनन्, न त तिनीहरूले लड़ाइँ गर्न तालीम लिनेछन्‌।
“म मिश्रीहरूलाई मिश्रीहरूकै विरुद्धमा सुर्‍याउनेछु। दाजुभाइको विरुद्धमा दाजुभाइ लड्‌नेछन्, छिमेकीको विरुद्धमा छिमेकी, सहरको विरुद्धमा सहर, र राज्‍यको विरुद्धमा राज्‍य।
तेरा योद्धाहरू बारम्‍बार ठक्‍कर खाएर एक-अर्कामाथि लोट्‌नेछन्, तिनीहरूले भन्‍नेछन्, ‘उठ, अत्‍याचारको तरवारदेखि भागेर हामीहरू आफ्‍नै मानिसकहाँ र आफ्‍नै जन्‍म-देशमा फर्केर जाऔं’।
“तँ मेरो युद्धको गदा, लड़ाइँको हतियार होस्‌। तँद्वारा म जातिहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छु, तँद्वारै म राज्‍यहरूलाई नाश गर्छु।
जाति-जातिहरूका बीचमा यो घोषणा गर: लड़ाइँको निम्‍ति तयार होओ, योद्धाहरूलाई सुनाओ। लड़ाइँ गर्ने सबै मानिसहरू नजिक आएर आक्रमण गरून्‌।
हे मेरो शत्रु, मेरो खिसी गर्दै सन्‍तुष्‍ट नहो। म लड़े तापनि उठिहाल्‍नेछु। म अँध्‍यारोमा भए तापनि परमप्रभु मेरो ज्‍योति हुनुहुनेछ।
तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्‍ला सुन्‍नेछौ। नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्‍यक नै छन्, तर अन्‍त्‍य त त्‍यत्ति नै बेला हुँदैन।
नर्कटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्‍काउनुहोस्‌, जाति-जातिका बाछाहरूका बीचमा साँढ़ेको झुण्‍डलाई डाँट्‌नुहोस्‌। पराजित भएपछि, यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्‍याऊन्‌। लड़ाइँमा खुशी हुने जातिलाई छरपष्‍ट पारिदिनुहोस्‌।
जसले विजय प्राप्‍त गर्छ त्‍यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ, र म त्‍यसका परमेश्‍वर हुनेछु, र त्‍योचाहिँ मेरो छोरो हुनेछ।
होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्‍दा पनि अझ बढ़ी छौं।
१ तिमोथी 6:12
विश्‍वासको उत्तम लड़ाइँ लड़। अनन्‍त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो, जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्‍थितिमा तिम्रो विश्‍वासको असल साक्षी दिएका थियौ।
२ कोरिन्थी 10:4
किनकि हाम्रो युद्धका अस्‍त्र-शस्‍त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्‍लाहरू नाश गर्ने ईश्‍वरीय सामर्थ्‍य तिनमा छ।
तिनीहरू साथसाथै लड़ाइँमा आफ्‍ना शत्रुहरूलाई गल्‍लीको हिलोमा कुल्‍चीमिल्‍ची गर्ने शक्तिशाली मानिसझैँ हुनेछन्, किनभने परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ, तिनीहरूले लड़ाइँ गर्नेछन्, र घोड़ामा सवार हुनेहरूलाई पराजय गर्नेछन्‌।
म सबै जातिहरूलाई यरूशलेमको विरुद्ध लड़ाइँ गर्नलाई भेला गराउनेछु, र यो सहर लिइनेछ, र घरहरू लुटिनेछन्, र स्‍त्रीहरूलाई बलात्‍कार गरिनेछ। सहरको आधा भाग निर्वासन गरिनेछ, तर बाँकी रहेका मानिसहरूचाहिँ सहरबाट अलग लगिनेछैनन्‌।
 तिमीहरूका बीचमा लड़ाइँ र झगड़ाहरू कुन कुराले ल्‍याउँछ? के यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन्‌ र? तिमीहरू इच्‍छा त गर्दछौ, तर तिमीहरू पाउँदैनौ। तिमीहरू हत्‍या गर्दछौ र लोभ गर्छौ, तर पाउन सक्‍दैनौ। तिमीहरू झगड़ा गर्दछौ र लड़ाइँ गर्छौ। तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्‍वरसँग माग्‍दैनौ।
 तिमीहरू युद्धमा जाँदा शत्रुहरूसँग तिमीहरूकाभन्‍दा असंख्‍य घोड़ा, रथ र विशाल सेना देखेर उनीहरूसँग नडराओ, किनभने तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्‍याउनुहुने परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। युद्धमा जान अघि पूजाहारीले सेनाको सामु गएर यसो भन्‍नुपर्छ, “हे इस्राएली हो, सुन। आज तिमीहरू तिमीहरूका शत्रुका विरुद्धमा लड़ाइँ गर्न जाँदैछौ। फितलो मन नगर, नडराओ, नआत्तिओ। उनीहरूका सामुन्‍ने भयभीत नहोओ। किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर नै तिमीहरूका शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरूका निम्‍ति लड़ेर तिमीहरूलाई विजयी तुल्‍याउन साथसाथै जानुहुन्‍छ।”
 हरेक व्‍यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्‌। परमेश्‍वरबाट आएको अधिकारबाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन्, ती परमेश्‍वरबाटै नियुक्त भएका हुन्‌। यसकारण प्रशासकहरूका विरुद्धमा खड़ा हुनेले परमेश्‍वरबाट नियुक्त भएकाहरूको विरोध गर्छ, र जस-जसले विरोध गर्छन्, तिनीहरूले दण्‍डको आज्ञा पाउनेछन्‌। किनभने सुकर्मको निम्‍ति होइन, तर कुकर्मको निम्‍ति शासकहरूको डर मानिन्‍छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहँदैनौ? त्‍यसो भए, असल काम गर, र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्‍नेछ। किनकि तिम्रो भलाइको निम्‍ति तिनी परमेश्‍वरका सेवक हुन्‌। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरवार व्‍यर्थमा भिर्दैनन्‌। खराब काम गर्नेमाथि परमेश्‍वरको दण्‍ड ल्‍याउने तिनी परमेश्‍वरका सेवक हुन्‌। यसकारण परमेश्‍वरको दण्‍डबाट बच्‍नलाई मात्र होइन, तर विवेकको निम्‍ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ।
 दाऊदको भजन  मेरो चट्टान, परमप्रभुको प्रशंसा होस्‌, जसले मेरो हातलाई युद्ध गर्न, र मेरा औँलाहरूलाई लड़ाइँ गर्न सिकाउनुहुन्‍छ। उहाँ मेरा करुणामय परमेश्‍वर र मेरो किल्‍ला हुनुहुन्‍छ, मेरो गढ़ र मेरो उद्धारक। उहाँ मेरो ढाल, उहाँमा नै म शरण लिन्‍छु। उहाँले मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्‍छ। हे परमप्रभु, मानिस के हो, र तपाईंले त्‍यसको वास्‍ता गर्नुहुन्‍छ? मानिसको छोरा को हो, र तपाईं त्‍यसको विचार गर्नुहुन्‍छ? मानिस त एक मुट्ठी सासजस्‍तो मात्र छ, त्‍यसको आयु ढलिजाने छायाजस्‍तो मात्र छ। हे परमप्रभु, आफ्‍नो स्‍वर्गलाई खोल्‍नुहोस्‌ र तल ओर्लनुहोस्‌, पहाड़हरूलाई छुनुहोस्‌, र तीबाट धूवाँ निक्‍लिआओस्‌। बिजुली चम्‍काउनुहोस्‌ र मेरा शत्रुहरूलाई छिन्‍नभिन्‍न पार्नुहोस्‌। आफ्‍ना बाण छोड्‌नुहोस्‌ र तिनीहरूलाई लखेटिदिनुहोस्‌। उच्‍च स्‍थानबाट आफ्‍नो हात पसार्नुहोस्‌, र उर्लंदो बाढ़बाट र विदेशीहरूका हातबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस्‌ र छुटाउनुहोस्‌, जसका मुख झूटा कुराहरूले भरिएका छन्‌, र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्‌। हे परमेश्‍वर, म तपाईंको निम्‍ति एउटा नयाँ गीत गाउनेछु, दश-तारे सारङ्गी बजाएर म तपाईंको स्‍तुति गाउनेछु, तपाईं जसले राजाहरूलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्‍छ, जसले आफ्‍नो दास दाऊदलाई घातक तरवारबाट बचाउनुहुन्‍छ। मलाई विदेशीहरूका हातबाट उद्धार गरिदिनुहोस्‌ र छुटकारा दिनुहोस्‌। जसका मुख झूटा कुराहरूले भरिएका छन्‌, र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्‌। तब हाम्रा छोराहरू तिनीहरूका युवावस्‍थामा मौलाउँदा रूखहरूजस्‍तै हुनेछन्‌, र हाम्रा छोरीहरू दरबार सिँगार्न कुँदिएका स्‍तम्‍भहरूजस्‍ता हुनेछन्‌। हाम्रा धनसारहरू हरकिसिमका अन्‍नहरूले भरिनेछन्‌, हाम्रा भेड़ाहरू हजारौँ गुणा बढ्‌नेछन्‌, हाम्रा खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्‌। हाम्रा गोरुहरूले गह्रौँ भारी बोक्‍नेछन्‌। हाम्रा पर्खालहरू फोरिनेछैनन्‌, न हामी बन्‍दीगृहमा जानुपर्नेछ, न त हाम्रा सड़कहरूमा रुवाइको आवाज उठ्‌नेछ। ती मानिसहरू धन्‍यका हुन्‌, जसका जीवनमा यी आशिष्‌हरू छन्‌। यस्‍ता मानिसहरू धन्‍यका हुन्‌, जसका परमेश्‍वर परमप्रभु हुनुहुन्‍छ।